Nagu saabsan - Hebei Hexi Carbon Co., Ltd.
Hebei Hexi Carbon Co., Ltd. waa shirkad ballaadhan oo hal-joogsi ah oo soosaarta korantada garaafyada. Cinwaankeeda xafiisku wuxuu ku yaal Handan, magaalo qaran oo taariikhi ah iyo dhaqameed ku taal Gobolka Hebei, Shiinaha. Warshadeeda waxay ku taalaa Changxiang Township, Cheng 'Degmo, Magaalada Handan, Gobolka Hebei, Shiinaha. Waxay ku fadhidaa dhul dhan 415,000 mitir murabac ah waxayna leedahay 280 shaqaale. Hantida joogtada ah ee 350 milyan yuan, shirkaddu waxay soo saartaa 30,000 tan oo koronto garaafyo ah sanadkiiba, inta badan waxay soo saartaa badeecooyin kala duwan oo kaarboon ah sida korantada korantada korantada korantada, korantada korantada korantada korontada ku shaqeysa, korantada korantada garaafka awoodda sare leh, budada garaafka iyo baloogyada garaafyada. Shirkaddayadu waxay muddo dheer si qoto dheer u beeraysay warshadaha garaafyada, iyadoo diiradda saareysa R&D iyo soosaarida alaabada graphite. Waxyaabaha garaafka ee ay soo saartay shirkadda ayaa si ballaaran loogu isticmaalay mashiinnada CNC, xarumaha wax lagu farsameeyo, khadadka wax soo saarka, aaladaha mashiinka, been abuurka, metallurgy, sameynta birta, dhismaha, warshadaha kiimikada, shubka, wasakhaha, elektarooniga iyo warshadaha kale. Iyada oo tayo sare leh wax soo saar iyo qalab baaris tayo leh oo dhameystiran, waxay dhaaftay nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001, nidaamka maareynta deegaanka ee ISO14001 iyo nidaamka shahaadada nidaamka maareynta caafimaadka iyo amniga OHSAS18001.
Wax soo saarkayagu sifiican ayuu u iibiyaa Shiinaha oo dhan waxaana loo dhoofiyaa Ameerika, Ruushka, Japan iyo dalal kale. Shabakadda adeegga waxay ka kooban tahay adduunka oo dhan. Shirkaddu waxay hirgelisaa maareynta macluumaadka, waxay ku tiirsan tahay nidaamka naqshadeynta kombiyuutarka ee horumarsan iyo nidaamka wax soo saarka caqliga leh, waxay ogaataa hawlgallada jaango'an, waxayna si dhakhso leh uga jawaabtaa baahida macaamiisha.
Meelaha ganacsiga ee shirkadda waxaa ka mid ah: iibka jumlada ah ee alaabta ceyriinka garaafka ah, garaaf nadiif ah oo sare oo la soo dhoofiyay oo ka kooban 99.99% kaarboon, garaafis istiraatiijiyad sare oo nadiif ah, garaaf loogu talagalay koronto-bixiyaha gaarka ah ee EDM, iyo garaafto gaar ah; Soosaarka baaxadda weyn ee korantada EDM, doonka garaafka 'PECVD graphite', usha garaafka daahirnimo sare, saxan garaaf ah, garaafka xannibaadda, budada garaafka, iwm.
Waxaan taageernaa falsafada ganacsiga ee tiknoolajiyada hogaamineysa, tayada ugu horeysa iyo macaamilka marka hore, waxaanna u abuureynaa macaamil bulsho iyo dhaqaale dhaqaale.
Caqli-galnimada, tayada, shaabadeynta shaabadda. Shirkaddu waxay leedahay koox xirfadlayaal ah oo adag oo sameeya caaryada, 32,000 plants dhirta wax soo saarka, in ka badan 161 mashiinnada garaafka CNC iyo 8 baarayaal saddex-cabbir leh, waxayna si adag u raacdaa nidaamka maaraynta tayada leh ee ISO 9001: 2000 si ay macaamiisha u siiso alaab tayo sare leh iyo adeegga iibka kadib.